पाउल स्टर्लिङ – अलराउन्डर (आयरल्यान्ड)
एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को तेस्रो संस्करण शनिबार सकिएको छ । ललितपुर प्याट्रियोट्सले भैरहवा ग्लाडिएटर्समाथि १४ रनको जित हासिल गर्दै पहिलो पटक उपाधि उचाल्यो । प्रतियोगिता आफैँमा विवादरहीत नरहे पनि मैदान भित्रमात्र हेर्ने हो भने यो भव्यताका साथ सम्पन्न भयो । ६ फ्रेन्चाइज क्लबले डेढ दर्जन विदेशी खेलाडीलाई कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा उतारे । सहभागी विदेशी खेलाडीमध्ये एक ठूलो नाम हो, पाउल स्टर्लिङ । अलराउन्डर स्टर्लिङले आयरल्यान्डको उमेर समूह हुँदै राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका छन् । ईपीएलमा चितवन टाइगर्सबाट खेलेका स्टर्लिङले ६ इनिङमा १ सय ५७ रन बनाए ।
बलिङतर्फ ४ इनिङमा ११ ओभर बलिङ गरेका स्टर्लिङले १ सय २ रन दिएर ३ विकेट लिए । विभिन्न ट्वान्टी–२० तथा टि–१० लिगहरुमा आक्रामक ब्याटिङबाट चर्चा बटुलेका स्टर्लिङसँग बाह्रखरीका सुजन श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको अंश :
ईपीएलको अनुभव कस्तो रह्यो ? आफ्नो प्रदर्शनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
ईपीएल एकदमै राम्रो भयो । प्रतियोगिताका खेलहरु निकै प्रतिस्पर्धात्मक थिए । स्थानीय र विदेशी गरी थुप्रै प्रतिभावान खेलाडीहरु थिए । व्यक्तिगत रुपमा मेरो प्रदर्शन मिश्रित रह्यो । सबै खेलमा राम्रो गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । समग्रमा भन्नुपर्दा तीन खेल सन्तोषजनक रहे । बाँकी खेल सोचेजस्तो हुन सकेन । टोलीलाई केही खेलमा जिताउनका लागि भूमिका पनि रह्यो । स्ट्राइक रेट नराम्रो होइन तर अझ राम्रो पनि हुन सक्थ्यो ।
ईपीएलमा पहिलो अनुभवपछि नेपाली क्रिकेटबारे तपाईँको धारणा कस्तो रह्यो ?
म पहिल्यैदेखि नेपाल आउन चाहन्थेँ । म मात्र होइन । अन्य विदेशी खेलाडी पनि यहाँ आउन इच्छुक थिए र छन् पनि । हाम्रोमा दर्शक मैदानसम्म आउन ठूलै खेल हुनुपर्छ । तर यहाँ समर्थकहरु क्रिकेट हेर्न आउँछन् । यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।
नेपाल आउनु अगाडि र यहाँ आएपछि नेपाली क्रिकेटबारे तपाईँको धरणामा केही परिवर्तन भयो ?
पछिल्लो पाँचवर्षमा हामीले नेपालविरुद्ध थुप्रै पटक खेलका छौं । ट्वान्टी–२० विश्वकप छनोटमा पनि हामीले खेलेको हो । त्यसैले म आश्चर्यचकित भइनँ । मलाई थाहा थियो, यहाँ प्रतिभावान खेलाडी छन् भनेर । हामी नेपालविरुद्ध खेल्न चाहन्थ्यौं । आशा गरौं यहाँ आएर एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्नेछौं । यहाँमात्र होइन आयरल्यान्डमा पनि । नेपाल क्रिकेट धेरै राम्रो स्थितिमा छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । आशा गरौं अझ राम्रो गर्दै जानेछ ।
के कुराले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनायो ?
लेफ्ट आर्म स्पिनर ।
आयरल्यान्डले जस्तै नेपालले पनि टेस्ट राष्ट्रसम्मको यात्रा तय गर्न के गर्नुपर्ला ?
पक्कै पनि त्यसका लागि सकेसम्म धेरै भन्दा धरै खेल खेल्नुप¥यो । एकदिवसीय खेलहरु आयोजना गर्नुप¥यो । यहाँ क्रिकेट बोर्ड निलम्बनमा छ । सम्भवतः क्रिकेट राम्रो हुनको लागि क्रिकेट बोर्डको निलम्बन फुकुवा हुनु पहिलो पाइला हो । पक्कै पनि नेपाली समर्थक राष्ट्रिय टोलीले राम्रो गरोस् भन्ने चाहन्छन् । घरमा एकदिवसीय खेलेको हेर्न चाहन्छन् । टिमले राम्रो गर्न निरन्तर क्रिकेट खेल्नु आवश्यक छ । जति धेरै खेल्यो त्यसबाट सिक्दै जाने हो ।
नेपाल कस्तो लग्यो ?
दूर्भाग्य, मैले धेरै नेपाल घुम्न पाएको छैन । क्रिकेट मैदानमा धेरै समय बित्यो । काठमाडौं र यस वरीपरीको मात्र हेर्दा पनि राम्रो छ । आशा छ, फेरि आएर काठमाडौंमात्र होइन पूरा देश घुम्न पाउँ ।
आयरल्यान्ड, अफगानिस्तानलगायतका अन्य देशसँग नेपाललले दुईपक्षीय तथा क्रिकोणात्मक शृंखला आयोजना गर्न सक्छ ?
एकदम । कुनै शंका छैन । तर यहाँको पिचमा केही सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो पिचमा अफगानिस्तान जस्तो टिमविरुद्ध खेल्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसका साथै आउटफिल्डमा पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ । आउटफिल्ड ‘स्मुथ’ हुनुपर्छ । यस्तो आउटफिल्डमा मिसफिल्ड हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । खेलाडी घाइते हुने सम्भावना पनि हुन्छ । यी कुराहरु सुधार गर्ने हो भने नेपालले दुईपक्षीय तथा त्रिकोणात्मक शृंखला आयोजना गर्न सक्छ ।
नेपाल बसाइका प्रिय क्षणहरु कुनै छन् ?
त्यस्ता क्षणहरु धरै छन् । कुन भन्ने । सम्भवतः हामी सबैलाई प्राकृतिक दृश्यहरु मन पर्छ । क्रिकेट मैदानको पृष्ठभूमिमा देखिने पहाडहरु निकै सुन्दर छन् । अझ घाम डुब्ने बेला देखिने दृश्य मनमोहक थियो ।